Mirrors Nepal » यसपटक तराजुमै भोट किन ? ‘हजार शब्द’को एउटै जवाफ
१८ मंसिर २०७४ |
यसपटक तराजुमै भोट किन ? ‘हजार शब्द’को एउटै जवाफ
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १३:०८
| ज्ञानुलक्ष्मी पराजुली |
‘मौन अवधि’ लाग्नुभन्दा ठीक २४ घन्टाअघि यो लेखोट लेख्दै छु, जुन ठीक एक हजार शब्दको छ । सोमबार मध्यरातिबाट यो लेखोट ‘आचारसंहिताबिपरीत’ हुनेछ ।
मेरो छिमेकमा एकजना ७६ वर्षीय वृद्धा हजुरआमा छिन् । अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला उनी भन्थिन्– ए केटी हो, यसपालाको चुनाउमा त्यो रन्जु भन्ने केटीलाई छाप हान्ने हो, मिल्छ कि मिल्दैन ?
ती हजुरआमाले विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौंको मेयर उम्मेदवार बेनकी रन्जु दर्शनालाई भोट हाल्ने इच्छा जाहेर गरेकी थिइन् । कारण– घरका सदस्यले ती हजुरआमालाई रन्जुको एउटा भाषण सुनाइदिएका थिए । तब हजुरआमालाई लाग्यो– अब यीनलाई चुनाउमा भोट दिनुपर्छ ।
अहिले ती नै हजुरआमा भन्दैछिन्– यो चुनाउमा चैं त्यो रेडियोमा बोल्ने नानीलाई छाप हान्छु । यताबाट उनलाई छाप हान्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
ती हजुरआमा काठमाडौंकी मतदाता होइनन् । तर, उनले यसपटक काठमाडौं–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रलाई भोट दिन चाहेकी छन् । उनलाई यसपटक आफूले भोट हाल्न चाहेको पार्टीको नामसम्म थाहा छैन । भन्छिन्– नयाँ पार्टी जन्मेको छ रे ।
ती वृद्धा हजुरआमालाई मासिक भत्ता खुवाउने सरकारका सञ्चालक वा भत्ता केही सयबाट बढाएर हजारसम्म पुर्याइदिने पार्टीप्रति आकर्षण छैन (हुनुपर्ने त्यो थियो । तर, उनी नयाँलाई भोट हाल्ने संकल्पमा छिन् । आखिर किन ?
जवाफ सजिलो र सिधा छ– उनी पनि नयाँ कुराको पखाईमा छिन् । उनलाई पनि लागेको रैछ, अहिलेका ठूला भन्ने दलले माखो मारेनन् । कुरै मात्रै गर्दै आए, आपसमा बाझ्दै–जुध्दै आए । तर, देश बन्दै बेनन । ७६ वर्षको उमेरमा अशिक्षित एक वृद्धा नामै थाहा नभएको पार्टी, राम्रोसँग नाम थाहा नभएको उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न आतुर छिन् ।
यसको अर्थ अहिलेको साझा विवेकशील पार्टीप्रति नयाँ पुस्ताको मात्रै आकर्षण छैन, पुरानो राजनीतिबाट डामिएका ती हजुरआमाको पुस्तालाई पनि अझै आशा छ– अब केही गर्छन् भने नयाँले गर्छन् । उनलाई लागिसकेको छ– ठूला र पुराना पार्टी भएर मात्रै हुँदैन, सही बाटो र तरिका नसमात्दासम्म देश बन्दैन ।
बाटोतिर भर्खरै कलेज पढ्न थालेका (जो नयाँ छन् र पहिलोपटक भोट हाल्दैछन्) युवा–युवती कुरा गर्दै हिँडेको सुन्छु– जीवनको पहिलो भोट सही ठाउँमा, झ्याप्पै चुनाव चिह्न तराजुमा ।
चिया पसलतिर, मःम पसलतिर उही कुरा सन्छु (खास गरी पढे–लेखेका र युवा पुस्ता)– यसपटक सबै कुरा छाडिन्छ, भोट तराजुमै हालिन्छ ।
यी त प्रतिनिधि दृश्य र आवाज मात्रै हुन्, जो यसपालिको चुनावमा विकल्प कुरेर बसिरहेका छन् । जो ‘अरूले केही गरेनन्, हामी गर्छौं, एकपटक मौका दिनुस्’ भनेर आएकालाई अवसर दिन आतुर छन् ।
म एक २५ वर्षीया विद्यार्थी र विवाहित महिला हुँ । अहिले म केही काम गर्न चाहन्छु, स्वरोजगार बन्न चाहन्छु । तर, अवसर छैन । उति धेरै सीप छैन, भएको सीपले काम पाउँदैन । अनि, कहिलेकाहीं मेरो दिमाग घुम्छ– काम गर्न देशै छाड्नुपर्ने रैछ ।
फेरि दल÷नेताका भाषण सुन्छु– अर्को साल देशमै ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन्छौं । सोच्छु– त्यो ५ लाखभित्र म पनि पर्छु । तर, नेताका यस्ता कुरा सुनेकै दशकौं भइसक्यो । अझै थुप्रै वर्ष जाने होलान् ।
देशमा मजस्ता (युवा पुस्ता) का लागि पसिना बगाउने ठाउँ किन छैन ? पढेपछि क्षमताअनुसार किन रोजगारी पाइँदैन ? विश्वविद्यालयमा किन सजिलै पढ्न पाइँदैन ? लाइसेन्स बनाउन सरकारी अड्डामा लाइनमा बसेका बेला किन प्रहरीले लाठी हान्छ ? सडकको धूलो–हिलो आतंक किन बन्द हुँदैन ? समयमै बिजुलीको बिल काट्ने प्राधिकरणले बत्ती किन समयमै दिँदैन ? सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा कर्मचारी किन घुस माग्छन् ?
हामीलई ‘नेपालमा ८३ हजार क्षमताको विद्युत् क्षमता छ’ भन्ने किताब पढाउने सरकार किन विदेशबाट बिजुली किनिरहेछ ? हरेक पटक बन्ने प्रधानमन्त्री किन यो देशको भाग्य र भविष्यसँग ठट्टा गरेर जान्छन् ?
यी प्रश्न (प्रतिनिधि) ले बेला–बेला दिमाग हल्लाउँछन् । आखिर यो देशको समस्या के हो ? देश किन अघि बढ्दैन ? समृद्धिको ढोका किन खुल्दैन ? नागरिकको चेहरामा किन निराशाको घाम मात्रै दौडिरहेछ ?
छिमेकी देश भारत एउटा नदीले सम्पन्न बनेको छ । अरब राष्ट्रले तेल बेचेरै नपत्याउने विकास गरेको छ । विश्वका थुप्रै राष्ट्र पानी बेचेर धनी बनेका छन् । थुप्रै राष्ट्र कृत्रिम पूर्वाधार बनाएर देशमा बर्सेनि लाखौं पर्यटक भित्र्याएर अर्थोपार्जन गरिरहेछन् ।
हामीकहाँ विश्वकै अग्लो सगरमाथा छ । प्रकृतिले दिएका अनुपम सम्पदा छन् । केही सय किलोमिटरको बीचमा सप्ताकोशी, तमोर, नायाराण्ी, कालीगण्डकी नदी छन् । हामीले यी सबैको सदुपयोग गर्न किन सकेनौं ? राज्य कहाँ चुकिरहेको छ ? यी सब गर्न बाधक बनिरहेको चिजको जात के हो ?
मेरो एकसरो बुझाइ छ– यो सबको जड ‘खराब राजनीति’ हो । अहिले मजस्ता लाखौं युवाको भविष्य यही गलत राजनीतिबाट डामिएको छ । नयाँ पुस्ताको हालत के होला ? हामी कहिलेसम्म शासकहरूका लागि प्रयोगशला बनिरहने ?
यो देशमा जनताको सेवाका नाममा राजनीति गर्नेले अक्सर भाषाण बेचे, राष्ट्रवादको नारा बेचे । पटक–पटक चुनावका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याए । दुई वर्षमा लेख्ने भनेको संविधानका नाममा खर्बौं स्वाहा पारे । गाउँमा १० लाखमा बन्ने सानो बाटो ५ वर्षमा बनेन । सहरमा दुईवर्षे योजनाको ढल ७ वर्षसम्म बनेन । तैपनि, हरेक साल उनै पुराना अनुहार आएर भन्छन्– देश हामी बनाउँछौं ।
खासमा हामीकहाँ असल संस्कारको राजनीति र विकासप्रेमी नेताको चरम अभाव रहेछ । हो, राजनीतिक आन्दोलन एक समयमा खास अवधिका लागि अवाश्यक हुन्छ । तर, सधैं त्यसलाई भजाएर समृद्धि समात्न सकिँदैन । अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही हो ।
हेरौं– देशमा इमान र सदाचारको राजनीति छैन । देश बनाउनभन्दा मुठ्ठीभर व्यक्ति आफू ‘बनिन’ केन्द्रित छन् । बरु, भ्रष्टाचार छ । यतिसम्म कि, यदि यो देशको शासकले हिम्मत गर्ने र पर्दा आफू पनि सजाय भोग्न तयार हुने हो भने, कसम ! यो देशका सबै जेल भ्रष्टाचारी र घुसखोरीले भरिन्छन् ।
यसपटक यो देशका सचेत, पढे–लेखेका र साँचो अर्थमा यो देशलाई असल संस्कारसहितको राजनीतिक अभ्यासमा लैजान आफूले दिने एक मत सही ठाउँमा दिने समय आएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारले भोलि जितेर गएपछि के गर्छन्, भनेजस्तै गर्छन् वा अरूजस्तै हुन्छन्, म अहिले त्यो अड्कल वा केरकार गर्ने पक्षमा छैन ।
कोही आएर मलाई ‘तराजुमै भोट किन ?’ भनेर सोध्यो भने मसँग चित्तबुझ्दो कारणसहितका ठूला जवाफ पनि छैनन् । यत्ति हो– म यसबेला चरम निराशामा छु । यो देशमा मैले केही देखिरहेको छैन, निराशाबाहेक । सबै उस्तै देख्छु, सबै पुरानै देख्छु । यो चरम निराशाबीच पनि आशाको सानो भिल्को देख्छु–विवेकशील साझा पार्टी ।
तसर्थ, यति भनिसकेपछि भोट तराजुमा हालौं भनेर आह्वान गरिरहनु नपर्ला । यसपटक अरूलाई हराउन हैन, विवेकशील साझा र उसका उम्मेदवारलाई अवसर दिन मतदान गरौं, पटक–पटक हैन, एकपटक । यो देशलाई विकल्प दिऊँ ।
(मोरङ, बेलबारी नगरपालिका)